पौरखले उदाएका उद्यमी : औषधी बेच्ने कामदारदेखि उत्पादन गर्ने मालिकसम्म
पुस १४, २०७५
बुटवल – बुटवलमा धेरै युवा उद्यमशील छन् । सानै उमेरदेखि उद्योग व्यवसायमा हात हालेर सफल पनि बनेका छन् ।
जसले गर्दा रूपन्देही आर्थिक ‘हब’को रूपमा विकास भएको छ । तिनैमध्येका एक हुन बुटवलमा सुरज भट्टराई ।
भट्टराईको प्रगतिको कथा यति लोभलाग्दो छ कि आज रूपन्देहीको औषधिको व्यापार व्यवसायको ठूलो हिस्सा भट्टराईसँग छ भन्दा फरक नपर्ला ।
पाल्पाको तानसेन नगरपालिका–९ बर्तुङमा जम्मिएका भट्टराई २०५० सालमा एसएलसी परीक्षा दिएर बुटवल झरे । उनलाई पढाएर शिक्षक बनाउने उनका बुवाको रूचि थियो । तर भट्टराईको रूचि भने स्वास्थ्य सम्बन्धी विषय पढ्ने थियो ।
बुवालाई कुनै जानकारी नदिइ उनी एसएलसी दिएपछि ‘एचए’ पढ्न भनेर बुटवल झरे । एसएलसीपछि बुवाको सल्लाहविना पढ्न भनेर बुटवल झरेका भट्टराईसँग पैसा थिएन । यताउता भौतारिँदा उनले बुटवलको श्रेष्ठ ड्र डिस्ट्रिव्यूटर (औषधि पसल) मा काम पाए, मासिक ५ सय रूपैयाँ पाउने गरी । काम गरेको ६ महिनामा त्यहाँ कार्यरत धेरै स्टाफहरूले काम छाडे ।
अरूले काम छाड्दा उनले त्यहाँ धेरै जिम्मेवारी पनि पाए । जिम्मेवारी पाएसँगै कुन औषधि कुन बिरामीले प्रयोग गर्छन्, औषधिको मूल्य, बिक्रेतासँग औषधिको डील गर्न सबै जान्ने भए । उनी डाक्टर होइनन् तर डाक्टरले दिने पे्रक्रिप्सनको जानकार भए । कुन रोगको लागि के औषधि प्रयोग गरिन्छ ? स्पष्ट जान्ने भए ।
६ महिनामा तलब ५ सयबाट ८ सय पुग्यो । एसएलसीको रिजल्ट पनि आयो । उनी द्वितीय श्रेणीमा एसएलसी उत्तीर्ण भए ।
एचएको पढाइ बुटवलमा हुँदैन्थ्यो । चितवन र दाङमा मात्र थियो । उनी एचए पढ्न चितवन पुग्दा त्यहाँ भर्नाको मिति सकिइसकेको रहेछ । बुटवल फर्किएर उनी बुटवल बहुमुखी क्याम्पसमा आईए भर्ना भए । उनी बिहान कलेज गएर दिउँसो फार्मेसीमा काम गर्न थाले ।
झण्डै १ वर्ष काम गरेपछि आफूले नै अब फार्मेसी सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने सोच उनीमा आयो । उनी खगेश्वर भण्डारी र कृष्ण ज्ञवाली मिलेर बुटवल मैत्रीपथमा सनराइज मेडिसिन सप्लायर्स २०५३ सालमा शुरू गरे । त्यो बेला २–२ लाख रूपैयाँ जुटाएर ६ लाख रुपैयाँको लगानीमा ३ जना युवाहरू औषधि पसल सञ्चालन गरे । त्यो समयम रूपन्देहीमा औषधिका १२ वटा होलसेल पसलहरू थिए ।
सानै झण्डै १८ वर्षको उमेरमा सुरजकै नेतृत्वमा पसल सञ्चालनमा आयो । ६ लाखको लगानीबाट शुरू गरिएको व्यवसायले १ वर्षमै १ करोड ८० लाख रूपैयाँको कारोबार भयो । उनीहरू तीनै जना बर्दघाट, भैरहवा, कपिलवस्तु, पाल्पा, गुल्मी, दाङ, प्यूठानसम्म औषधि सप्लाई गर्न थाले । ३ वर्षमा सप्लायर्सले सम्पूर्ण लगानी उठायो । औषधि पसल सञ्चालनमा आएको ३ वर्षपछि भट्टराईले औषधि मात्र बिक्री गरेर हुँदैन, औषधि उद्योग पनि सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने सोच आयो ।
वीरगञ्जमा रहेको गिलिसिरिन र केमिकल उद्योग हेर्न भट्टराई त्यहाँ पुगे । त्यहाँको उद्योग हेरेर आएपछि उनीले फेरि सर्जिकल तथा केमिकलको होलसेल डिलर सञ्चालन गरे, ८ जनाको टीमसँग ।
डिलर थप्ने क्रममा उनले ग्रेस फर्मासेटुकल आयुर्वेद उद्योग दर्ता गरेर तिलोत्तमा–११ मा १५ करोड रूपैयाँ लगानीमा ८ जनाले उद्योग सञ्चालन गरे । उद्योग टेक्नोलोजी, भवन, पूर्वाधारको हिसाबले नेपालकै राम्रो आयुर्वेद उद्योगमा पर्छ । जहाँबाट निलास्ट्रो, पाल्लोडेक्स, एप्टीबुम, हेपाडिक्स, डीएस, अस्टोफेलेक्स बुटी गरी ४२ प्रकारका औषधि उत्पादन हुन्छन् ।
उनी भन्छन्, ‘दृढ अठोट, काममा लगनशिलता, निरन्तरताको अनुशासनभित्र रहेर काम गर्न सकेमा सबै क्षेत्रमा सफल हुन सकिन्छ । तर धैयता पनि गर्नुपर्छ । मलाई जे सोचको छु त्यो पुग्दै गएको छ । अठोट लिएको कुरा पूरा भएकै छन् ।’
त्यहीँ आयुर्वेद उद्योगको पछाडि १५ कट्ठा जग्गा थप गरेर एलोपेथिक औषधि उद्योग सञ्चालन गर्दैछन् । अबको १ वर्षभित्र लाइफ सेभिङ ड्र मुटु, सुगर, मानसिक, छाला, हाडजोर्नी, महिला रोग सम्बन्धी विभिन्न औषधि उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित ३० करोड रूपैयाँ लगानीमा ठूलो ‘प्रोजेक्ट’ सञ्चालनको योजना बनाएका छन् ।
एउटा सटरको भाडा तिर्छन् १३ लाख १७ हजार
एउटा सटरको भाडा कति होला ? अनुमान गर्नुहोस् बजारमा ३० हजार, ५०, ७० हजार, १ लाख वा २ लाख रूपैयाँ । होइन । रूपन्देहीका युवा व्यवसायी भट्टराई एउटा औषधि पसलको भाडा मासिक १३ लाख १७ हजार रूपैयाँ तिर्छन् । २०७२ सालमा लुम्बिनी अञ्चल अस्पतालको व्यावसायिक सटरहरूको टेन्डर आह्वान गरियो ।
अस्पतालभित्र एउटा औषधि पसलका भट्टराईले सनराइज मेडिसिलनको नाममा उनले १३ लाख १७ हजार रुपैयाँको टेन्डर हाले । १३ लाख १३ हजारको टेन्डर हालेका दाङको कमला मेडिसिन नेपाललाई नपरेर भट्टराईले सटर पाए ।
सटरको टेन्डर परेपछि उनलाई ‘५० लाख रूपैयाँ दिन्छौ, सटर हामीलाई दे’ भन्ने समेतका अफर आएका थिए । तर उनले दिएनन् । आफै औषधि राखेर बिक्री शुरू गरे । उनले टेन्डर हाल्नुपूर्व त्यहाँ २ लाख भाडा तिर्दै आएका थिए । मासिक ४० लाख रूपैयाँको मात्र औषधि बिक्री हुने पसलमा उनले सञ्चालन गरेपछि मासिक ९० लाख रूपैयाँको औषधि बिक्री हुन थाल्यो ।
उनले धेरै क्षेत्रमा हात हालेर सफल भएका छन् । जुन जनप्रिय फार्मेसीमा १८ जनाले काम गर्छन् । जहाँ बाहिरका औषधि पसलभन्दा २ प्रतिशत सस्तोमा औषधि उपभोक्तालाई बिक्री गर्नुपर्छ । उनले सञ्चालन गरेको विभिन्न औषधि पसलदेखि उद्योगमा गरी १ सय २० जना युवाले रोजगार पाएका छन् ।
उनी व्यवसायमा मात्र सफल छैनन्, संघ संस्थामा पनि उत्तिकै क्रियाशील र सफल छन् । भट्टराई नेपाल औषधि व्यवसायी संघ लुम्बिनी अञ्चलको उपाध्यक्ष हुन् । बुटवल उद्योग वाणिज्य संघको गएको वर्ष भएको अधिवेशनमा सबैभन्दा धेरै मत ल्याएर कार्यसमिति सदस्य पद जिते । उनी सबै क्षेत्रमा लोकप्रिय समेत छन् ।
पुस १४, २०७५ मा प्रकाशित
प्रकाश आचार्य लोकान्तरका लागि ५ नम्बर प्रदेशका प्रतिनिधि हुन् ।
कहाँ जान्छ राजधानी काठमाडौंको घनाबस्तीबाट निस्किने ढल ?
गुठीलाई मुठीमा राख्न पाइँदैन ! [फोटोफिचर]
‘साना केपी ओली’को चमत्कार : घरमै ‘स्टीमर’ बनाएर पानीजहाजको झल्को !
राजधानीमा 'विप्लव' समूहको नेपाल बन्दको प्रभाव [फोटोफिचर]
हावाहुरी पीडितको कन्तबिजोग : राहत बाँड्न छाडेर मुख्यमन्त्री र मन्त्री शपथ खानमै व्यस्त
सुदूरपश्चिमका विद्यालय भवन निर्माण अलपत्र, 'कमिसनको लोभ'मा शिक्षाका कर्मचारी !
गोडाविहीन नाकको शिखर–यात्रा, जग हसाउने गाईजात्रा ! पूरा पढ्नुहोस
क्रान्तिले जलाएको संस्कृत पढ्ने सपना पूरा पढ्नुहोस
गुठी विधेयक बहस : दुईचार कमजोरी देखाएर सिङ्गो परम्परामाथि दखल ! पूरा पढ्नुहोस
ज्ञानेन्द्र शाह, ज्ञानेन्द्र शाही र जनमत पूरा पढ्नुहोस
संवैधानिक आयोगमाथि संसदीय समितिको नाजायज अंकुश पूरा पढ्नुहोस
धार्मिक आस्था गिजोल्ने सरकारको अविवेकी निर्णय पूरा पढ्नुहोस
चौथो वर्षमा लोकान्तर : तीन वर्षमा के गर्‍यौं, अब के गर्छौं ? पूरा पढ्नुहोस
शान्ति र सुरक्षा : चनाखोपनको अपेक्षा पूरा पढ्नुहोस
आन्दोलनका कारण भक्तपुर अस्पतालका सबै सेवा ठप्प भक्तपुर- वीर अस्पतालपछि दोस्रो जेठो सरकारी अस्पतालका रूपमा रहेको भक्तपुर अस्पतालमा कर्मचारी आन्दोलनका कारण आकस्मिक सेवा बाहेकका सम्पूर्ण सेवा ठप्प भएको छ । अस्पतालको सबै सेवा ठप्प पार्...
माइतीघरमा हजारौंले गरेको फोहोर उठाउँदै ३ जना ! व्यापारीको ध्यान कमाइमा
वरिष्ठ प्रहरी कमाण्डर र तीन तालिवान लडाकू मारिए
रिलिज भएको १५ दिनमा सलमानको भारतले कमायो २०० करोड भारु
सर्वोच्चले रोकेन लोक सेवाको विज्ञापन, सबै फाइल एक साथ पेश गर्न आदेश
नगद लुटेर लघुवित्तकी कर्मचारी तामाङको हत्या भएको पुष्टि, अभियुक्त खोजी शुरू